Fitsaboana ny covid-19 :: Raikitra tokoa ny andrana amin'ilay tsindrona ranom-panafody • AoRaha
Fitsaboana ny covid-19 Raikitra tokoa ny andrana amin’ilay tsindrona ranom-panafody
Nanomboka ny fampiasana ny tsindrona ranom-panafody ao anatin’ny fenitra fahatelo hoentin’i Madagasikara hitsaboana an’ireo olona mitondra ny tsimok’aretina « Covid-19 ». « Mandeha tokoa ny andrana eto Antananarivo sy Toamasina », hoy ny dokotera Andrianjara Charles, tale jeneralin’ ny Ivon-toeram-pikarohana fanafody vita amin’ny zavamaniry eto Madagasikara (IMRA), tamin’ny alalan’ny antso an-tariby, omaly.
Mizotra miandalana, toy ny any amin’ireo firenena hafa, ny fanaovana ny andrana ary tazonina ho tsiambaratelo aloha ny vokatry ny fampiasana an’io tsindrona io. Toy izany koa ny isa sy ny mombamomba an’ireo olona hanaovana ny andrana. « Tsy hoe afenina akory fa mbola tsy maintsy mandalo dingana maromaro ny andrana izay vao azo ampahafantarina ampahibemaso ny vokany. Misy ireo mpikaroka manara-maso akaiky an’izany eto amintsika », hoy hatrany ny tale jeneralin’ny IMRA.
Nohamafisina fa tsy antery ny fampiasana ny tsindrona amin’ny marary iray. Ialohavan’ny fanaovana taratasy fifanekena mazava amin’ ireo marary ny fampiasana azy, izay no hany fantatra, hatreto, dia ahitana ny zavamaniry «Arthemisia» izy io.
Na eo aza ny firosoana ao anatin’izao fenitra fahatelo ho entina mitsabo ny valanaretina izao dia mipetraka ho fanafody iray hoentina manasitrana an’ireo olona mitondra ny tsimok’aretina « Covid-19 » eto amintsika hatrany ny tambavy Covid-organics (CVO). « Matoa mbola vitsy ireo olona tena ahitana tranga mampanahy dia azo ambara fa nahitana fahombiazana ny fampiasana an’io tambavy io. Raha kelikely ny tahan’ny tsimokaretina ao amin’ilay olona marary dia mahasitrana tsara ny CVO », hoy ihany ny dr Andrianjara Charles.
Mila fantarina kosa ny fahafahana mamerina misotro ny tambavy, amin’ilay fisorohana, ho an’ireo maniry ny hanamafy hatrany ny hery fiarovany. « Azo atao tsara ny mamerina misotro ny tambavy, saingy elanelanina fito andro ny fampiasana azy. Tsy misy olana na averina intelo aza. Ajanona kosa izany rehefa mahatsiatro fa salama ny olona iray na tsy mitondra ny tsimok’aretina aza », araka ny fanampim-panazavan’ny tale jeneralin’ny IMRA.
Fahasarotan’ny fitsaboana :: Niampy vehivavy taizan’aretina iray ny matin’ny coronavirus
Fetin’ny mozika :: Manentana ireo artista haneho ny talentany ny AFT